SHORT DRESSES THAT WILL MAKE YOU SUPER CUTE
No Comments on SHORT DRESSES THAT WILL MAKE YOU SUPER CUTE
ဝတ်လိုက်ရင် ချစ်စရာကောင်းပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိနေစေမယ့် ဂါဝန်အတိုလေးများ
We’ve all been addicted to denims, suits, bags, and cute shoes. These items may be part our wardrobe, but if we want to level up our outfits, we can just wear short dresses to highlight our legs. On that note, we collated the cutest short dresses we saw on MDS Myanmar that you’ll need in your closet!
ဂျင်းတွေ၊ ကုတ်နဲ့ဘောင်းဘီဝမ်းဆက်တွေ၊ အိတ်တွေ နဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဖိနပ်လေးတွေကို အားလုံးက စွဲလမ်းနှစ်သက်ကြပါတယ်။ အဲ့ဒီအမျိုးအစားတွေက ကိုယ့်ရဲ့အဝတ်ဗီရိုထဲက တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပေမယ့် ကိုယ့်ရဲ့ဝတ်စားဆင်ယင်ပုံကို တစ်ဆင့်မြှင့်ချင်တယ်ဆိုရင်‌တော့ ရှည်လျားတဲ့ခြေတံလေးတွေကို ထင်ပေါ်စေမယ့် ဂါဝန်အတိုလေးတွေဝတ်ဆင်သင့်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် MDS Myanmar ရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဂါဝန် အတိုလေးတွေကို စုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့အဝတ်ဗီဒိုထဲမှာ လိုအပ်နေတဲ့ဝတ်စုံလေးတွေပါ။
Maddie Contrast Ruffled Dress in Mustard @55,000 KS
Migen Contrast Knit Dress in Black @39,000 KS
Racquel Flutter Ruffled Dress in White Floral @49,000 KS
Veska Flared -Hem Dress Pink @49,000 KS
Zarie Ruffled-Hem Skorts Romper in wine
Jina Riuffled Dress in Pink @59,000 KS
Tulsa Ruffled-Hem Dress in Midnight @49,000 KS
Awdin Ruched Dress in Blue Polka Dots @59,000 KS
PS Make sure to catch MDS Myanmar’s Live sale every Wednesday, they havealot of surprises!
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တိုင်းမှာ MDS Myanmar ရဲ့ Live sale ရှိလို့ ကြည့်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။ MDS က Surprise တွေ အများကြီးနဲ့စောင့်နေပါတယ်။
4 SIMPLE STEPS TO MAKE YOUR CLOSET NEATER
No Comments on4SIMPLE STEPS TO MAKE YOUR CLOSET NEATER
အဝတ်ဗီရိုကို သပ်သပ်ရပ်ရပ်ထားနိုင်ဖို့ နည်းလမ်း ၄ သွယ်
Saying goodbye to the clothes you don’t use anymore is the first step to clean your closet, but how do you make your closet look neater after decluttering?
အဝတ်ဗီရို ကို ရှင်းမယ်ဆိုရင်တော့ ပထမဦးဆုံး မဝတ်တော့တဲ့အဝတ်အစားတွေကို ဖယ်ထုတ်လိုက်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဝတ်တွေကို ဖွပြီးရင် ရှင်းလင်းသွားအောင် ဘယ်လိုပြန်လုပ်ကြမလဲ။
We collated four things you can easily do to make your closet look neat and vibrant:
ကိုယ့်ရဲ့အဝတ်ဗီရို ကို သန့်သန့်ရှင်းရှင်း နဲ့ သပ်သပ်ရပ်ရပ် ဖြစ်စေဖို့ လွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့ နည်းလမ်း ၄ မျိုး ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
#1 Use coordinating hangers (အဝတ်ချိတ်တဲ့ ချိတ် တွေ သုံးပါ။ )
#2 Hang your clothes by color and by length (ချိတ်တဲ့အခါမှာ သူ့အရောင်အလိုက်၊ အရွယ်အစားလိုက် သေချာစီပြီးချိတ်ပါ။ )
Photo credits @mariekondo
#3 Compartmentalize (အဝတ်အစားတွေကို သူ့အမျိုးအစားအလိုက် သေချာခွဲထားပါ။)
(တီရှပ်၊ ညဝတ်အင်္ကျီ နဲ့ အားကစားဝတ်စုံတွေကို ကျစ်လစ်အောင် လိပ်ပြီး ဗူးထဲထည့်ပါ။)
Photo credits @pinterest & @ikeasingapore
#4 Again, empty and clean your closet (အဝတ်ဗီရို ကို မလိုတာတွေဖယ်ပြီး သေချာရှင်းလင်းပါ။ )
Let go of what you don’t use anymore. (ကိုယ်မသုံးတော့တဲ့ပစ္စည်းတွေကို သိမ်းမထားပါနဲ့။)
Tags closet, Fashion, ootdmyanmar, organize, tips